Ibhethri le-E-bike, Ibhethri le-LiFePO4, Ibhethri lezezimboni - SOSLLI
Isixazululo sebhethri seLithium enhle kakhulu nomhlinzeki othembekile wemikhiqizo yebhethri nozakwethu
Ingxenye ebalulekile yanoma iyiphi i-E-bike
Ukukhetha okuhle kwazo zonke izinhlobo nezinhlobo zakho
Ibhethri lokugcina amandla elenziwa ngokwezifiso ISO9001: 2015
umenzi wohlelo lokulawulwa kwekhwalithi
Umkhiqizi weminyaka engu-10+
Ubukhulu bokuzala nokuphepha okukhulu
Ikhwalithi ephezulu ye-li-ion ekhokhwa kabusha nge-2600mah 3.7V 1 ...
18650 3.6V 3500mAh Lithium Ion ibhethri Sanyo Ba ...
I-3.6V 6250mAh LG Lithium ion Ibhethri Pack Ye-In ...
Ozakwethu kukho konke
I-11.1V 30Ah Li-Ion 18650 ILithium Ion Li-Ion I-Pack yebhethri yesibani Solar Street
KUNGANI UKHETHA USOSLLI
kungani ukhethe ibhethri le-lithium-ion
I-Lithium-ion ibhethri chemistry isiphenduke ikhemikhali yebhethri yezimboni yokuzikhethela kwayo yonke into kusuka ezimotweni zikagesi ukuya kwisitoreji samandla, kusuka kwezentengiso kuya kokusetshenziswa kwezicelo zamasosha. Izinzuzo zamakhemikhali ebhethri ye-lithium-ion afaka. · Amandla aphezulu kakhulu aletha isikhathi eside phakathi kwamashaji · Usayizi weCompact nesisindo esisheshayo
· Isevisi ye-7/24, impendulo esheshayo embuzweni yamakhasimende ngaphakathi kwehora le-12hrs · Xazulula izinkinga ngokushesha (24hrs) uma kukhona okungalungile ngekhwalithi yemikhiqizo yethu. · Umkhiqizi wokuhola webhethri we-lithium othole u-ISO9001: 2015, UL, CE, RoHS, UN38.3, MSDS njll izitifiketi. · Yonke imikhiqizo yebhethri ye-SOSLLI imboza umshuwalense wesikweletu semikhiqizo yase-US $ 1,000,000 yi-CPIC.
Izinzuzo ze-SOSLLI: (Sebenzisa Ngokuqinile ISO9001 System System)
1. Abasebenzi be-Production System 1600, Izisetshenziswa ezisezingeni eliphakeme ezingeniswe zivela eJapan naseNingizimu Korea zakha umugqa wokukhiqiza ozenzakalelayo. 2. Ukukhiqizwa kwekhwalithi yekhwalithi ye-Production 4-Dimensional, abasebenzi abayi-110 QC, ukuhlolwa kwe-100%. Abahlinzeki abaphakeme abasebenza embonini abayi-10, amabhethri atholwe i-CE, i-RoHS, UL, KC, IEC62133, i-MSDS, i-UN38.3, njll. 3. I-OEM / ODM (Flexingly Customizable) Isipiliyoni seminyaka eyi-10+, Nikeza amakhasimende imodyuli yebhethri ehambisanayo ukuze ihlangane ehlukile izidingo zesicelo. 4. Onjiniyela abaqhubekayo abangama-66+, isikhungo se-R&D kanye nesikhungo sokuhlola esinenhlangano yeqembu eliqinile, izinsiza ezithuthukile kanye nokutshalwa kwezimali okukhulu.
Ukuxhumana okuqotho, zinikele ekufezeni amakhasimende kanye nabasebenzi. Umsebenzi wethimba futhi ugxile ekunikezeni imikhiqizo nezinsizakalo zebhethri ze-Li-ion ezinhle kakhulu.
Ithembekile futhi ikhuthele, Inokusebenza okusebenzayo nokusebenzayo, Ikhwalithi kanye nensizakalo, Ukubambisana kanye nokuwina okuningi.
Iba ubuchwepheshe obuholayo, ikhwalithi enhle kakhulu, entsha futhi esebenza kahle, nesevisi yokuqala yamazwe onke yamandla amasha!
Iphakethe lebhethri lamandla, I-Power Lithium Battery Pack, I-20ah Lithium Ion Ibhethri, Ibhethri Lithium Lamandla, Amaseli ebhethri weLithium Ion, Ibhethri le-3.6v Lithium-Ion,